Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany Ottawa dia manambara ny fiakaran'ny isan'ny mpitsidika 8.8 isan-jato
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany Ottawa dia manambara ny fiakaran'ny isan'ny mpitsidika 8.8 isan-jato
Ottawa fizahan-tany mankalaza 11 tapitrisa mpitsidika tonga teto an-drenivohitra, maneho ny fisondrotana 8.8% isan-taona.
Tamin'ny 2017, ny tanànan'i Ottawa dia fonenan'ny andiana hetsika manokana mandritra ny herintaona satria nandray ny fankalazana ofisialy nanamarihana ny 150 taona nananganana ny Kaonfederasiona kanadiana izy. Ankehitriny dia manana antony hafa hankalazana ny fizahan-tany ny fizahan-tany Ottawa, miaraka amin'ireo tarehimarika ofisialy mampiseho fa mpitsidika 11 tapitrisa no tonga teto an-drenivohitra nandritra io vanim-potoana io, nampiseho ny fisondrotana 8.8% isan-taona.
Nisy fiakarana 8.7% amin'ny isan'ireo fitsidihana an-trano any Ottawa, fiakarana 7.8% amin'ny isan'ireo mpandeha avy any Etazonia ary fiakarana 10.9% amin'ny isan'ny mpanao fialantsasatra any ivelany. Nambara ihany koa fa nisy fiakarana 10.3% amin'ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika, mitentina CAD $ 2.3 miliara.
Michael Crockatt, filoham-pirenena sady CEO an'ny fizahan-tany Ottawa dia nilaza fa, "Ireo isa ireo dia manamarina ny fitomboan'ny indostrian'ny fizahantany fa ampahany amin'ny fankalazana ny faha-150 taonan'ny Canada. Manomboka amin'ny hetsika Ottawa 2017 nahavariana hany ka hatramin'ireo tetikasa lova marobe, dia mazava fa nisy valiny ny fampiasam-bola teto amin'ny tanànantsika: Ottawa no toerana hitsidihana ary faly izahay manohy ny firosoana amin'ny taona 2018. "
Ny UK no tsena loharano lehibe indrindra any Canada ho an'ny dia iraisam-pirenena miaraka amn Ottawa izay mihamitombo hatrany eo amin'ireo mpanao fialantsasatra anglisy. Nanampy i Emma Cashmore, talen'ny UK momba ny fizahan-tany any Ottawa, fa “taona tsy nampino ho an'ny renivohitr'i Canada ny 2017 ary hitantsika fa miroso amin'ny 2018 ny hafanam-po ary ankehitriny ho an'ny dia 2019. Izahay dia mametraka ny varotra fitsangatsanganana any UK ho ivon'ny paikadim-pitomboantsika ary amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka dia mitady hatrany ny hametrahana an'i Ottawa ho tanàna marina mandritra ny taona, miaraka amin'ny vanim-potoana efatra tena miavaka. Amin'ny alàlan'ny asanay miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy amin'ny alàlan'ny hetsika fampiroboroboana anay miaraka amin'ny haino aman-jery fitsangantsanganana any UK; nahita ny fitomboan'ny fahalianana tany Ottawa izahay, na dia toerana fitsangatsanganana an-tanàn-dehibe irery aza, ary tafiditra ao anatin'ireo dia lavitra afovoan-tany any Canada Atsinanana. ”
Miaraka amin'ny fidirana mivantana mivantana isan'andro avy any London Heathrow miaraka amin'ny Air Canada ao anatin'ny fito ora monja, Ottawa dia tanàna tototry ny lova manankarena, mirehareha amin'ny tranombakoka, galeria ary traikefa ara-kolotsaina tsy manam-paharoa. Ny mpitsidika dia afaka manantena ny hakingan-gastria miavaka, ny fiantsenana tsara ary ny hetsika eclectic mivantana ary ny sehatry ny fiainana amin'ny alina.